Kufsiga oo ku badanaya xeryaha lagu barakacay ee Muqdisho - Radio Ergo
Kufsiga oo ku badanaya xeryaha lagu barakacay ee Muqdisho
Waxaa kordheysa tirada haweenka lagu kufsado xeryaha lagu barakacay ee Muqdisho iyo duleedkeeda. Shantii cisho ee ugu horreysay bishan Diseembar waxaa la kufsaday 12 haween ah sida aan ka soo xigannay isbitaal Madiina. Hay’adda Horumarinta Haweenka ee SWDC ayaa iyaduna diiwaangelisay in 500 ay gaarayaan haweenka soo barakacay ee xeryaha lagu kufsaday saddexdii bil ee u dambeysay. Tiradaas ayaa ka dhigan in habeenkiiba la kufsaday in ka badan shan haween ah.
Nuuro Muxyadiin oo qeybta baarista u qaabbilsan isbitaal Madiina ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in kiiskii ugu darnaa ee ay qaabbileen uu ahaa saddex haween ah oo isku goob lagu kufsaday saddex toddobaad ka hor.
Lix nin oo afar ay hubeysnaayeen ayaa xilli fiid ah 16-kii Nofeembar weeraray xerada Daryeel ee degmada Kaxda oo ah halkan uu kiiskan ka dhacay. Waxay aqalladooda kala soo baxeen labo haween ah, mid saddexaad oo ka mid ahayd dadkii qeyladooda ku soo baxayna way ku sii darsadeen.
Ardo oo ka mid ah haweenka halkaas lagu kufsaday ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in ay ku soo naxday xabbado ay kor u ridayeen ragga weerarka soo qaaday, ka hor intii aanay afar ka tirsan ugu soo gelin buushkeeda oo geeska u xiga, kana kaxeysan. Waxay xaqiijisay in saddexdoodaba lagu garaacay baadka qoriga intii loo sii waday meel cidlo ah oo bannaanka xerada ah oo ah halka lagu kursaday. Haweenkaas middood waxay ahayd hooyo haysata lix carruur ah oo agoon ah.
Ardo oo saddex bilood ka hor abaarta uga soo barakacday degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellaha hoose ayaa xerada ku haysata gabar 12 jir ah oo ay aabbaheed kala tageen.
Madaxa hay’adda SWDC, Maryan Taqal Xuseen ayaa Raadiyo Ergo u sheegtay in sababta uu kufsigu ugu soo badanayo xeryaha ay tahay dhallinyarada iyo ciidanka meelahaas ka dhow ay aad u isticmaalaan maandooriyaha, in aysan jirin cid si gaar ah isaga xil saarta amniga xeryaha ama saldhigyo boolis oo u dhow, mugdiga ka dhashay koronto la’aanta iyo dadka soo barakacay oo ku hoyda aqallo aan albaabbo lahayn.
Haweenka xeryaha lagu barakacay waxay nolosha qoysaskooda ku tiirsan tahay dhaqaalaha ay ka helaan shaqooyin yaryar oo ay qabtaan. Laakiin Ardo waxay dhibaatada kufsiga ee ku dhacday ku khasabtay in aysan u shaqo-tegin suuqa Bakaaraha oo ay ku wareejin jirtay bacaha.
Hase yeeshee, hay’adda SWDC ayaa $100 siisa haweenayda la kufsado si ay ugu noolaato bisha ugu horreysa ee aysan shaqaysan karin niyadjabka iyo dhaawacyada gaara awgood. Waxay sidoo kale ka caawiyaan tiiraanyo-bixinta iyo inay tagaan isbitaallada.
Qoysaska soo barakacay ee xeryaha ku jira ayaa sidoo kale la kulma dhac ay u gaystaan kooxo hubeysan, kuwaas oo ka qaata raashinka, telefoonnada gacanta iyo wixii kale ee gargaar ah ee ay helaan. Laakiin guddoomiyaha degmada Kaxda oo ay ku yaallaan xeryo dhowr ah ayaa Raadiyo Ergo u sheegay inay wadaan baaritaanno si wax looga qabto kuwa dhibaatooyinka ka geysanaya xeryaha.
Beeralayda Dalyare ee gobolka Sool oo xoolo dhaqato soo cayrtoobay ku caawiyey dhul beereed